Billy ရဲ့ Fan တစ်ယောက်ကတော့ အခုလိုလှော်လိုက်ပြီ..။ - APANNPYAY
Home / Myanmar Idol / Billy ရဲ့ Fan တစ်ယောက်ကတော့ အခုလိုလှော်လိုက်ပြီ..။
Billy ရဲ့ Fan တစ်ယောက်ကတော့ အခုလိုလှော်လိုက်ပြီ..။
Apann Pyay 7:39 AM Myanmar Idol Edit
မပြောသေးဘူး ကြည့်နေတယ် လုပ်နေတာ မနေနိုင်တော့လို့ နည်းနည်းလေး ပြောပျဇီ
Myanmar Idol က Billy လမင်းအေး အကြောင်းပေါ့
လူတွေ က Billy ကို ဘာလို့အဲ့လောက် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းတွေ ပြောပြီး ပုတ်ခတ်နေကြလဲ ဆိုတာ နားကို မလည်နိုင်ဘူး
လူတွေ က သူ့ ကို စိတ်ပုတ်တယ်တဲ့
ကဲ ဟုတ်ပါပြီ ဘယ် အချက်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်ပုတ်တာလဲ သတ်မှတ်တာလဲ မေးကြည့်တော့
သူ Bottom ထိုင်ရရင် မျက်နှာညှိုးသွားလို့
သူ save ခံရရင် အရမ်းပျော် သွား တဲ့ ပုံ ဖြစ်နေလို့ တဲ့
Save ခံရပြီး Level တခုပြီး တခု တက်ချင်နေကြတဲ့ သူတွေကြီး ပဲ
Bottom ထိုင်ပြီး ထွက်သွား ရတာ ဘယ်သူကြိုက်မှာလဲ
Billy ဟာ သူ့ စိတ်ထဲ က ခံစားရတဲ့ အတိုင်း မျက်နှာမှာ ရိုးရိုးသားသား ပေါ် လာတာပဲ အပြစ်ဖြစ်ရသတဲ့လား
ဟုတ်ပြီ Bottom ထိုင် ရလည်း ပြုံးပျော် နေတာပဲ Save ခံ လိုက်ရတော့ တအား ဝမ်းနည်းပြီး ဝက်ဝက်ကွဲ ငို အဲ့လိုဆိုရင် အရမ်း စိတ်ထားကောင်းတဲ့ သူဖြစ်ပြီလား??
အဲ့လိုလူ ဟာ သူခံစားရတဲ့ အတိုင်း ထုတ်မပြပဲ ကိုယ်တကယ် ခံစားရတာနဲ့ ပြောင်းပြန် လုပ်ပြနေတာ စိတ်ရင်းကောင်းတာလား? ဟန်ဆောင်နေတာနဲ့ တောင် ပိုမတူဘူးလား
No 2. Billy ကို vote နေသူတွေ က နှာဘူးတွေတဲ့
အစက တော့ ကိုယ်လည်း အဲ့လို ထင်မိတော့မလို့ပဲ
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူ ချစ်စရာလေးလေ ယောင်္ကျားလေးဒေ ကလည်း Billy Billy ban ban ဘာညာတွေ ပြောနေကြတော့…
အဲ့တာနဲ့ ပဲ သူ ဆိုသွားတာတွေ လိုက်နားထောင်ကြည့်မိတယ်
အဲ့ ဒီမှာမှ သိလိုက်ရတာ သူ့ အသံ တော်တော်ကောင်းတာပဲ ဆိုပြီးတော့ပေါ့
သူ့ အသံ ကတော်တော် ချိုတယ် ပြီးတော့ ဆွဲ ဆောင်မှုရှိတယ် ပြီးတော့ အသံ အနိမ့်အမြင့် တွေ ကစားနိုင်တဲ့ အသံ power လည်းရှိတယ်
ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ မိန်း ကလေး အဆိုရှင် အသံပါ ဒါပေမဲ့ သူမှာ ပင်ကိုယ်အသံတခုလိုနေတာ (ဥပမာ mm idal season 1 က နင်ဇီမေလို ကိုယ်ပိုင်အသံမျိုး)
သို့သော် mm idol season2မှာ ပါတဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများရဲ့ အသံ က Rock ဆန်ပါတယ်
ယွန်းယွန်း မိုင်းမိုင်ဆိုင်း ပိုးမီ သားငယ် တို့ ရဲ့အသံ က Rock ဆန်တယ် မိုက်တယ် Rock week တွေ အသေလန်းကြတာတွေ့ရမှာပါ Rock မှ Rock ပဲ ဆိုသူတွေ ကတော့ အတော်ကြိုက်မှာပါ
အပြင်မှာ Rock album စုထုတ်ရင် အတော်မိုက်ကြမှာ
ဒါပေမဲ့ mm idol ဆိုတာ က သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲလေ သီချင်းပုံစံ ပေါင်းစုံကို ဆိုရတာ
အဲ့တော့ တချို့ အပါတ်တွေ မှာဆိုရင် အသံ နဲ့ သီချင်း က ဘယ်လိုမှ လိုက်ဖက်မှ မရှိသလိုကြီး ခံစားရစေလို့
ပြိုင်ပွဲ သဘော အရ ပြိုင်တဲ့ ထဲ မှာ သီချင်းပုံစံ ပေါင်းစုံနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေ ဆိုနိုင်တဲ့ Billy အသံကို ပိုကြိုက်မိတယ်
ဒါပေမဲ့ Billy ကလည်း perfect မဟုတ်ဘူးလေ
Rock week တုန်းဆိုရင် Billy ဆိုသွားတာ ပိုးမီ တို့ မိုင်းမိုင်ဆိုင်းတို့လောက် မကောင်းတာ လက်ခံ ရမယ်
ဒီလိုပဲ Blues week ရောက်တော့ Billy ဟာ အားလုံး ထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်း လက်ခံရမှာပဲ
အဲ့လိုတွေ ကျ လိုက်နားမထောင် Billy ကို ကြိုက်ရင် နှာဘူးလို့ပဲ သီချင်းနားထောင်ပြီး vote တာမဟုတ်ဘူး ဘာညာ တွေ အရမ်းပြောနေရင် ရီချင်မိတယ်
အသားလွတ် ဖောင်းထု ပိတ်ပြောနေတာလေး လျှော့ပြီး သီချင်းကို သေချာပြန်နားထောင်စေချင်တယ်
ကိုယ်ကတော့ သီချင်းတွေ သေချာ ပြန်နားထောင်ကြည့်တော့မှ Billy ကို ကြိုက်လာတော့တာ! :)
လူတယောက် ကို ပေါင်းလည်း မပေါင်းဖူးဘူး သူ့အကြောင်းလည်း သေချာ သိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ် အထင်တခုထဲနဲ့ သူများ သမီးပျိုလေး ကို စိတ်ပုတ်တယ်တို့ အယုတ်သမာမတို့ အမနာပ ပြောဆိုနေကြတဲ့ လူရဲ့ စိတ် ဓါတ် က ရော ကောင်းပါရဲ့လားလို့
ကျောင်းတုန်း က result ထွက်ရင် LCD နဲ့ ပြတယ်
ကိုယ့်နာမည် ပဲ အရင် ကြည့်မိတာပဲ
ကိုယ်အောင်သွားရင် Yay!! ဆိုပြီး ပျော်နေမိတာပဲ အာ့ စိတ်ပုတ်တာလား??? :3 :3
ကိုယ့် အောင်စာရင်းကြည့်ပြီးမှ မအောင်တဲ့ supply ထိတဲ့ သူတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့ result ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ပါရင် သွားအားပေးတာ
ကိုယ့် နာမည် အောင်စာရင်း ပါတာ မပါတာ စိတ်မွင်စား နောက်ထား ပြီး ကိုယ့်သူငယ်ချင်း supply ထိလ်ို့ဆိုပြီး ချုံးပွဲ ချငိုတာ တို့ ဘာတို့တော့ မလုပ်မိခဲ့ဘူး
အဲ့လို မလုပ်မိလို့ အရမ်းစိတ်ပုတ်တဲ့ သူ လို့ ခင်များ ကိုတယောက်ယောက် က လာစွပ်စွဲမယ်ဆိုရင်ရော???
ကိုယ်ချင်းစာတရားလေး ထားကြည့်ပြီး နည်းနည်းစဉ်းစားပါဦး
မကြိုက်ဘူး လား မ vote နဲ့ ပေါ့
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သူ ကို ကိုယ် vote ပေါ့
သူများ ကို ဆွဲချ နင်းခြေမှ ကိုယ့် အောင်မြင်မှု ရမယ်ထင်နေတုန်းလား
သူမ က မျက်ရည်တွေ အမြဲ ကျပြတတ်တဲ့ သူတော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး အာ့ကြောင့်ပဲ သူ က ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခံရပြီးပြီ
အသားလွတ် အမြဲ ပြောဆိုခံနေရတာတွေ မခံစားနိုင်တဲ့ အဆုံး ပြန်လည်ရှင်းပြ တဲ့ video လေးပြတယ် မခံစားနိုင်တော့တဲ့ အဆုံး သူမ ငိုတယ် တောင်းပန်တယ်
အဲ့ကျတော့ လည်း မျက်ရည်ခြူ post ဘာညာနဲ့ … အိုလမို!
ခင်များ အနေနဲ့ သူ့ နေရာ သူ့ခံစားနေတာ တွေ ခဏလေး ဝင်ခံစားကြည့် ရူးတောင်သွားဦးမယ်! :3 :3
ဝေဖန်ထောက်ပြ တာ မဟုတ်ပဲ အသေရေဖျက် အစွန်းရောက် ပြောဆိုနေတာတွေရပ်ပြီး ကိုယ် သဘော ကျတဲ့ သူ ကိုယ် vote! တယောက်မှ မကြိုက်လည်း ဘူ့မှ မ vote နဲ့ ! ဘယ်သူမှ လည်း ဇွတ်ကြည့်ခိုင်းနေတာမဟုတ်! :3
ကိုယ် ကတော့ No.9ကို ပဲ Vote ပြီလေ
May God bless you Billy! :)
Source - နန်စီထွယ်လုံ
မပွောသေးဘူး ကွညျ့နတေယျ လုပျနတော မနနေိုငျတော့လို့ နညျးနညျးလေး ပွောပဇြီ
Myanmar Idol က Billy လမငျးအေး အကွောငျးပေါ့
လူတှေ က Billy ကို ဘာလို့အဲ့လောကျ မိုကျမိုကျရိုငျးရိုငျးတှေ ပွောပွီး ပုတျခတျနကွေလဲ ဆိုတာ နားကို မလညျနိုငျဘူး
လူတှေ က သူ့ ကို စိတျပုတျတယျတဲ့
ကဲ ဟုတျပါပွီ ဘယျ အခကျြကို ကွညျ့ပွီး စိတျပုတျတာလဲ သတျမှတျတာလဲ မေးကွညျ့တော့
သူ Bottom ထိုငျရရငျ မကျြနှာညှိုးသှားလို့
သူ save ခံရရငျ အရမျးပြျော သှား တဲ့ ပုံ ဖွဈနလေို့ တဲ့
Save ခံရပွီး Level တခုပွီး တခု တကျခငျြနကွေတဲ့ သူတှကွေီး ပဲ
Bottom ထိုငျပွီး ထှကျသှား ရတာ ဘယျသူကွိုကျမှာလဲ
Billy ဟာ သူ့ စိတျထဲ က ခံစားရတဲ့ အတိုငျး မကျြနှာမှာ ရိုးရိုးသားသား ပျေါ လာတာပဲ အပွဈဖွဈရသတဲ့လား
ဟုတျပွီ Bottom ထိုငျ ရလညျး ပွုံးပြျော နတောပဲ Save ခံ လိုကျရတော့ တအား ဝမျးနညျးပွီး ဝကျဝကျကှဲ ငို အဲ့လိုဆိုရငျ အရမျး စိတျထားကောငျးတဲ့ သူဖွဈပွီလား??
အဲ့လိုလူ ဟာ သူခံစားရတဲ့ အတိုငျး ထုတျမပွပဲ ကိုယျတကယျ ခံစားရတာနဲ့ ပွောငျးပွနျ လုပျပွနတော စိတျရငျးကောငျးတာလား? ဟနျဆောငျနတောနဲ့ တောငျ ပိုမတူဘူးလား
No 2. Billy ကို vote နသေူတှေ က နှာဘူးတှတေဲ့
အစက တော့ ကိုယျလညျး အဲ့လို ထငျမိတော့မလို့ပဲ
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူ ခဈြစရာလေးလေ ယောကငြ်ျားလေးဒေ ကလညျး Billy Billy ban ban ဘာညာတှေ ပွောနကွေတော့…
အဲ့တာနဲ့ ပဲ သူ ဆိုသှားတာတှေ လိုကျနားထောငျကွညျ့မိတယျ
အဲ့ ဒီမှာမှ သိလိုကျရတာ သူ့ အသံ တျောတျောကောငျးတာပဲ ဆိုပွီးတော့ပေါ့
သူ့ အသံ ကတျောတျော ခြိုတယျ ပွီးတော့ ဆှဲ ဆောငျမှုရှိတယျ ပွီးတော့ အသံ အနိမျ့အမွငျ့ တှေ ကစားနိုငျတဲ့ အသံ power လညျးရှိတယျ
ဆှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့ မိနျး ကလေး အဆိုရှငျ အသံပါ ဒါပမေဲ့ သူမှာ ပငျကိုယျအသံတခုလိုနတော (ဥပမာ mm idal season 1 က နငျဇီမလေို ကိုယျပိုငျအသံမြိုး)
သို့သျော mm idol season2မှာ ပါတဲ့ မိနျးကလေး တျောတျောမြားမြားရဲ့ အသံ က Rock ဆနျပါတယျ
ယှနျးယှနျး မိုငျးမိုငျဆိုငျး ပိုးမီ သားငယျ တို့ ရဲ့အသံ က Rock ဆနျတယျ မိုကျတယျ Rock week တှေ အသလေနျးကွတာတှရေ့မှာပါ Rock မှ Rock ပဲ ဆိုသူတှေ ကတော့ အတျောကွိုကျမှာပါ
အပွငျမှာ Rock album စုထုတျရငျ အတျောမိုကျကွမှာ
ဒါပမေဲ့ mm idol ဆိုတာ က သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲလေ သီခငျြးပုံစံ ပေါငျးစုံကို ဆိုရတာ
အဲ့တော့ တခြို့ အပါတျတှေ မှာဆိုရငျ အသံ နဲ့ သီခငျြး က ဘယျလိုမှ လိုကျဖကျမှ မရှိသလိုကွီး ခံစားရစလေို့
ပွိုငျပှဲ သဘော အရ ပွိုငျတဲ့ ထဲ မှာ သီခငျြးပုံစံ ပေါငျးစုံနဲ့ လိုကျလြော ညီထှေ ဆိုနိုငျတဲ့ Billy အသံကို ပိုကွိုကျမိတယျ
ဒါပမေဲ့ Billy ကလညျး perfect မဟုတျဘူးလေ
Rock week တုနျးဆိုရငျ Billy ဆိုသှားတာ ပိုးမီ တို့ မိုငျးမိုငျဆိုငျးတို့လောကျ မကောငျးတာ လကျခံ ရမယျ
ဒီလိုပဲ Blues week ရောကျတော့ Billy ဟာ အားလုံး ထကျကောငျးတယျဆိုတာလညျး လကျခံရမှာပဲ
အဲ့လိုတှေ ကြ လိုကျနားမထောငျ Billy ကို ကွိုကျရငျ နှာဘူးလို့ပဲ သီခငျြးနားထောငျပွီး vote တာမဟုတျဘူး ဘာညာ တှေ အရမျးပွောနရေငျ ရီခငျြမိတယျ
အသားလှတျ ဖောငျးထု ပိတျပွောနတောလေး လြှော့ပွီး သီခငျြးကို သခြောပွနျနားထောငျစခေငျြတယျ
ကိုယျကတော့ သီခငျြးတှေ သခြော ပွနျနားထောငျကွညျ့တော့မှ Billy ကို ကွိုကျလာတော့တာ! :)
လူတယောကျ ကို ပေါငျးလညျး မပေါငျးဖူးဘူး သူ့အကွောငျးလညျး သခြော သိတာမဟုတျပဲနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျ အထငျတခုထဲနဲ့ သူမြား သမီးပြိုလေး ကို စိတျပုတျတယျတို့ အယုတျသမာမတို့ အမနာပ ပွောဆိုနကွေတဲ့ လူရဲ့ စိတျ ဓါတျ က ရော ကောငျးပါရဲ့လားလို့
ကြောငျးတုနျး က result ထှကျရငျ LCD နဲ့ ပွတယျ
ကိုယျ့နာမညျ ပဲ အရငျ ကွညျ့မိတာပဲ
ကိုယျအောငျသှားရငျ Yay!! ဆိုပွီး ပြျောနမေိတာပဲ အာ့ စိတျပုတျတာလား??? :3 :3
ကိုယျ့ အောငျစာရငျးကွညျ့ပွီးမှ မအောငျတဲ့ supply ထိတဲ့ သူတှေ သူငယျခငျြးတှေ ရဲ့ result ကိုကွညျ့ပွီး ကိုယျ့သူငယျခငျြး ပါရငျ သှားအားပေးတာ
ကိုယျ့ နာမညျ အောငျစာရငျး ပါတာ မပါတာ စိတျမှငျစား နောကျထား ပွီး ကိုယျ့သူငယျခငျြး supply ထိလျို့ဆိုပွီး ခြုံးပှဲ ခငြိုတာ တို့ ဘာတို့တော့ မလုပျမိခဲ့ဘူး
အဲ့လို မလုပျမိလို့ အရမျးစိတျပုတျတဲ့ သူ လို့ ခငျမြား ကိုတယောကျယောကျ က လာစှပျစှဲမယျဆိုရငျရော???
ကိုယျခငျြးစာတရားလေး ထားကွညျ့ပွီး နညျးနညျးစဉျးစားပါဦး
မကွိုကျဘူး လား မ vote နဲ့ ပေါ့
ကိုယျကွိုကျတဲ့ သူ ကို ကိုယျ vote ပေါ့
သူမြား ကို ဆှဲခြ နငျးခွမှေ ကိုယျ့ အောငျမွငျမှု ရမယျထငျနတေုနျးလား
သူမ က မကျြရညျတှေ အမွဲ ကပြွတတျတဲ့ သူတော့ မဟုတျခဲ့ဘူး အာ့ကွောငျ့ပဲ သူ က ပုတျခတျပွောဆိုခံရပွီးပွီ
အသားလှတျ အမွဲ ပွောဆိုခံနရေတာတှေ မခံစားနိုငျတဲ့ အဆုံး ပွနျလညျရှငျးပွ တဲ့ video လေးပွတယျ မခံစားနိုငျတော့တဲ့ အဆုံး သူမ ငိုတယျ တောငျးပနျတယျ
အဲ့ကတြော့ လညျး မကျြရညျခွူ post ဘာညာနဲ့ … အိုလမို!
ခငျမြား အနနေဲ့ သူ့ နရော သူ့ခံစားနတော တှေ ခဏလေး ဝငျခံစားကွညျ့ ရူးတောငျသှားဦးမယျ! :3 :3
ဝဖေနျထောကျပွ တာ မဟုတျပဲ အသရေဖေကျြ အစှနျးရောကျ ပွောဆိုနတောတှရေပျပွီး ကိုယျ သဘော ကတြဲ့ သူ ကိုယျ vote! တယောကျမှ မကွိုကျလညျး ဘူ့မှ မ vote နဲ့ ! ဘယျသူမှ လညျး ဇှတျကွညျ့ခိုငျးနတောမဟုတျ! :3
ကိုယျ ကတော့ No.9ကို ပဲ Vote ပွီလေ
Source - နနျစီထှယျလုံ